“Waxaan la kulanay xaalad adag kulankii Brighton” – Tababare Solskjær oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Brighton – Gool FM
“Waxaan la kulanay xaalad adag kulankii Brighton” – Tababare Solskjær oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Brighton
(Premier League) 20 Jan 2019. Macalinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa si weyn u amaanay ciyaartoydiisa Red Devils, kadib guushii ay kaga gaareen 2-1 kooxda Brighton, kulankooda 23-aad ee horyaalka Premier League.
Shabakada BBC-da ayaa soo xigatay wareysi uu bixiyay tababare Ole Gunnar Solskjær kadib marka ay ciyaarta soo idlaatay wuxuuna yiri:
“Waxaan kaga soo muuqanay si wanaagsan kulankan aan la ciyaarnay kooxda Brighton, waxaan awoodnay inaan ciyaarta si weyn u soo gaba gabeyno qeybtii labaad, lakiin waxa aan seegnay fursado badan”.
“Waxaan dhibaato kala kulanay kooxda Brighton 20-kii daqiiqo ciyarta ugu dambeeysay Marcus Rashford wuxuu dhaliyay gool qurux badan, waxaan ka codsaday inuu is dajiyo kadib markii uu qasaariyay fursado badan”.
“Maanta waxaan maray imtixaan adag, ma aanan soo bandhigin qaab ciyaareedka aan doonayay”.
Si kastaba 2-dii gool ay guusha ku gaartay kooxda Manchester United waxaa u kala dhaliyay xidigaha Pual Pogba iyo Marcus Rashford.
Natiijada ay maanta gaartay kooxda Manchester United waxay sare u qaadeen dhibcahooda dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna haatan leeyihiin 44 dhibcood, iyagoo dhanka kala sareynta kaga jira kaalinta 6-aad.
HORDHAC: Huddersfield v Manchester City